milina fanontana flexo CI ekonomika
inona no atao hoe ci flexo printing
Inona no atao hoe CI press?Ny milina fanontam-pirinty afovoany, indraindray antsoina hoe amponga, tsindrim-peo mahazatra na fanontam-pirinty CI, dia manohana ny toby miloko rehetra manodidina ny cylinder vy iray mipetaka ao amin'ny rafi-gazety lehibe, sary 4-7.Ny cylinder impression dia manohana ny tranonkala, w...
Inona ny fizotran'ny fanontam-pirinty flexo milina fanontam-pirinty?
Atombohy ny milina fanontam-pirinty, amboary ny cylinder fanontam-pirinty amin'ny toerana mihidy, ary tanteraho ny fanontam-pirinty voalohany Jereo ny santionany vita pirinty voalohany amin'ny latabatra fisafoana vokatra, jereo ny fisoratana anarana, toerana fanontana, sns., mba hahitana raha misy olana. , ary avy eo manaova supplem...
Ny fenitra kalitao ho an'ny takelaka fanontam-pirinty flexo
Inona avy ireo fenitry ny kalitaon'ny takelaka fanontam-pirinty flexo?1. Ny hateviny tsy miovaova.Izy io dia famantarana kalitao manan-danja amin'ny takelaka fanontam-pirinty flexo.Ny hatevin'ny tsy miovaova sy ny fanamiana dia singa manan-danja hiantohana ny vokatra fanontana avo lenta.Ny hateviny isan-karazany dia miteraka ...
Inona no atao hoe Central Impression Flexo Press
Satellite flexographic milina fanontam-pirinty, antsoina hoe zanabolana flexographic milina fanontam-pirinty, antsoina koa hoe Central Impression Flexo Press, anarana fohy CI Flexo Press.Ny fitaovana fanontam-pirinty tsirairay dia manodidina ny roller Impression afovoany mahazatra, ary ny substrate (taratasy, sarimihetsika, tsy ...
Inona no fahasimban'ny horonana anilox mahazatra indrindra Ahoana no hitrangan'izany fahasimbana izany sy ny fomba hisorohana ny fanakanana
Ny fanakanana ny sela anilox roller no tena lohahevitra tsy azo ihodivirana amin'ny fampiasana anilox rollers，Ny fisehoany dia mizara ho tranga roa: ny fanakanana ny anilox roller (sary 1) ary ny fanakanana ny sela anilox roller (sary. 2)....
Inona no karazana antsy lelan'ny dokotera?
Inona no karazana antsy lelan'ny dokotera?Dokotera lelan'antsy dia mizara ho Stainless vy lelan'ny sy polyester lelany plastika.Ny lelan'ny plastika dia matetika ampiasaina amin'ny rafi-pandrefesana dokotera efitrano ary matetika ampiasaina ho lelan-tsarimihetsika tsara amin'ny hetsika famehezana.Ny hatevin'ny plastika...
Inona avy ireo fepetra fiarovana amin'ny fiasan'ny milina fanontana flexo?
Ireto fepetra fiarovana manaraka ireto dia tokony hotandremana rehefa mampiasa ny milina fanontam-pirinty flexo: ● Tandremo ny tanana amin'ny fitaovana mihetsika.● Mifankazara amin'ireo teboka mifanandrify eo amin'ireo rollers isan-karazany.Ny teboka fanerena, fantatra ihany koa amin'ny hoe pinch c...
Inona no tombony azo amin'ny ranomainty UV flexo?
nataon'ny admin tamin'ny 22-01-31
Ny ranomainty UV Flexo dia azo antoka sy azo antoka, tsy misy solvent emissions, tsy mirehitra ary tsy mandoto ny tontolo iainana.Mety amin'ny famonosana sy fanontana vokatra misy fepetra ara-pahasalamana avo lenta toy ny sakafo, zava-pisotro, paraky, alikaola ary fanafody.Ny fanontana p...
Inona avy ireo dingana fanadiovana ny double-roller inking rafitra?
nataon'ny admin tamin'ny 22-01-26
Vonoy ny paompy ranomainty ary tapaho ny herinaratra mba hampijanonana ny ranomainty.Pompeo eran'ny rafitra mba hanamora ny fanadiovana.Esory ny fantson-dranomainty amin'ny co na unit.Atsaharo ny ranomainty roer.Hamafiso indray ny tsindry eo amin'ny ranomainty sy...
Ny fahasamihafana eo amin'ny milina fanontam-pirinty Flexo sy ny milina fanontam-pirinty rotogravure.
Flexo, araka ny soso-kevitry ny anarana, dia takelaka fanontam-pirinty flexographic vita amin'ny resin sy fitaovana hafa.Teknolojia fanontana taratasy izy io.Ny vidin'ny fanamboarana takelaka dia ambany lavitra noho ny an'ny takelaka fanontam-pirinty metaly toy ny takelaka varahina intaglio.Ity fomba fanontam-pirinty ity dia natolotra teo antenatenan'ny...
Inona no atao hoe milina fanontana flexographic karazana stack
Inona no atao hoe milina fanontana flexographic stacked?Inona no tena mampiavaka azy?Ny fitaovana fanontam-pirinty amin'ny milina fanontam-pirinty flexo stacked dia mitongilana ambony sy midina, Nalamina amin'ny lafiny iray na roa amin'ny rindrina lehibe amin'ny faritra vita pirinty, Ny fanontana tsirairay ...
Ahoana ny fisafidianana ny kasety rehefa manao pirinty flexo
Mila manonta teboka sy tsipika mivaingana miaraka ny fanontana Flexo.Inona ny hamafin'ny fametahana kasety tokony hofantenana?A. Kasety mafy B. Kasety tsy miandany C. Kasety malefaka D. Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo Araka ny fanazavana nomen'i Feng Zheng, injeniera zokiolona avy...